နေ့: မေလ42013
တူရကီ, ပူးတွဲစီမံကိန်းများကိုထွက်တင်ဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီတခုရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ Kocaeli စာချုပ်ထဲမှာနိုင်ငံ၏ရထားလမ်းကိုနိုင်ငံတော်မီးရထား Express ကိုရထားကုမ္ပဏီအားဖြင့်သာတည်လစ်ဗျားလစ်ဗျားအတွက်မီးရထားလမ်းပြန်လည်ပြုပြင်ပါလိမ့်မယ်။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဖွဲ့စည်းပုံ Tek Çelik Sanayi A.Ş. ၏ Kocaeli ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကျင်းပတဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတွင်စကားပြောသော စီမံခန့်ခွဲမှု [ပို ... ]
ငလျင်တစ်နှစ် 2003 high-speed ကိုရထား Assist အစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်ကနေ Izmit ငလျင်ကျွမ်းကျင်သူများကမှာ Speaking အကျိုးစီးပွား Izmit မြူနီစီပယ် EML ၏မူဘောင်အတွင်း "သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပွားသင်တန်း" အစီအစဉ်ကိုကတည်းကကျောင်းများအတွက်အစပျိုးနိုင်ပါလွဲချော်ရပ်တန့်။ ဒေါက်တာ Oguz Gundogdu နောက်တဖန်ဒီကဗျာမှတ်ချက်များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ [ပို ... ]
အမြန်ဆုံးရထားနှင့်တက္ကသိုလ် Atsou အလုပ်အကိုင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Antalya ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ACCI) "အလုပ်အကိုင်ကော်မတီ Vision ၏သတ်မှတ်ခြင်းအစည်းအဝေးကို" ရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ACCI မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း Professional ကကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူကျင်းပကြောင်း ACCI အားဖြင့်ကဆိုသည်။ Antalya နှင့် [ပို ... ]
ဗဟို Anatolia AK ပါတီ Antalya ဒုတိယဝန်ကြီးသစ်စာစောငျ့သိ Badak အသိအမှတ်ပြုရန်ခရီးသွားဧည့်အနေဖြင့်အစာရှောင်ခြင်းမီးရထား, မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း, ခရီးသွားဧည့်များ၏ xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုအခွင့်အလမ်းဗဟို Anatolia ၏သမိုင်းနှင့်သဘာဝအလှတရားကိုမြင်သောသဘောပေါက်နှင့်အတူ Antalya မှလာမယ့်ကပြောပါသည်။ လက်ထောက် [ပို ... ]
အကျပ်အတည်းများအတွက်နံနက်ယံ၌ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးBurulaşနံနက်ယံ၌အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကြီးမားဆုံးအကျပ်အတည်းကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောဘတ်စ်ကားနှင့်ကျောင်းသွားချင်သောသူကဲ့သို့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှအချို့သောအကြောင်းပြချက်, စီးပွားရေးသို့မဟုတ် Bursaray [ပို ... ]
မီးရထားကြွလာကာလ PRORAIL အတွက်ကျုံ့လိမ့်မယ်
ရှိသမျှသည်အခြားသောအစိုးရကဏ္ဍများသူတို့ကိုယ်သူတို့သတင်းများအရလည်းအစိုးရရဲ့ခြိုးခြံခြွေအတိုင်းအတာအားဖြင့်ထိခိုက်နေကြသည်နှင့်တူ PRORAIL ကြာသပတေးနေ့ဖွငျ့မီးရထား PRORAIL ကြေညာချက်, လာမယ့်ကာလအတွက်ကျုံ့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါရထားလမ်း၏ဘတ်ဂျက်ထဲကနေအစိုးရကိုဖေဖော်ဝါရီလ2ဘီလီယံယူရိုအတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ဖြတ်တောက်မှုစေမည်။ [ပို ... ]
အဆိုပါအမြင့်မြန်နှုန်းလိုင်း (ဓာတ်ပုံပြခန်း) တွင်စိုးရိမ်ငလျင်ပျက်ဆီးနေသောအိမ်ပိုင်ရှင်
အသစ် 29 အောက်တိုဘာလသမ္မတနိုင်ငံနေ့ယခုနှစ်စိုက်ပျိုးဘို့နှင့်အချို့သောကဏ္ဍများအတွက်ကွန်ကရစ် transvestite ပေါ်သို့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အမြင့်မြန်နှုန်းလိုင်းအတွက်ငလျင်ပျက်ဆီးနေသောအိမ်ပိုင်ရှင်, စိုးရိမ်ပူပန်အစ္စတန်ဘူလ်တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထား (YHT) စီမံကိန်းကိုအကြားလည်ပတ်ပါလိမ့်မယ် [ပို ... ]
အိုင်အဘယ်မှာရှိသနည်း လေဆိပ်မျို! çed'lရေကန်များ '' သစ်ပင်များကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြ, ရေအိုင်သို့ပြန်သွား၏။3ဝန်ကြီးဌာနမှတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ လေဆိပ်မှာသစ်ပင်များ EIA ကိုအစီရင်ခံစာရေကန်များနှင့်သန်းပေါင်းများစွာသောရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါရေအိုင်မှပြန်လာရေကန်များ '' ရေပေါ်မှာနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာ, သစ်ပင်များကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အစ္စတန်ဘူလ် 's မြောက်ပိုင်းအဆိုပါစေခံရ [ပို ... ]
TCDD အတွက်န်ထမ်းဖို့အငြိမ်းစားပင်စင်ပေးချေမှုလျှင်ပိုမိုလုပ်ဆောင်စေခြင်းငှါ, မီးရထားအက်ဥပဒေယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားထဲကနေအနားယူအရသိရသည်။ သောကလက်ရှိဥပဒေရေးရာ status ကိုမှစသောအပြောင်းအလဲမရှိဘဲ TCDD ရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အတူ "မီးရထားပို့ဆောင်ရေး၏လစ်ဘရယ်အပေါ်တူရကီဥပဒေ" ဟုတရားဝင်ပြန်တမ်းအတွက်အင်အားသုံးသို့ ဝင်. [ပို ... ]
Konya2။ အဆိုပါရထားဘူတာများတွင်နောက်ဆုံးအမှု
Konya2။ ဘူတာ Kabakci,2အတွက် AKP Konya လက်ထောက် Mustafa မကြာသေးမီကိစ္စတွင်။ အာကာသစခန်းတစ်ခုကို Tha ဗိသုကာ idyll ကပြင်ဆင်စီမံကိန်းများ၏နူးညံ့သောလက်ခံခဲ့သည်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ Konya စီမံကိန်းကိုပြန်မြွေ၏2ပုံပြင်။ မီးရထားဘူတာအပေါ် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ် Metrobus အချို့အချက်အန္တရာယ်မှာမြေငလျင်မြန်နှုန်းရထားနှင့်လေယာဉ်ကျိုးလိမ့်မည်
မှတ်ဘူမိရူပအင်ဂျင်နီယာပါမောက္ခဒြေအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းများအစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်မှဦးစီးဌာနတှငျဖှဲ့စညျးညီလာခံမှာစပီကာအဖြစ်ပါဝင်၏ကျောင်းသားများအတွက်မြေငလျင်ရည်ရွယ်ချက်ဆန့်ကျင်အသိပညာပေးရန်, အန္တရာယ်အချို့ Metrobus မြန်နှုန်းရထားနှင့်လေယာဉ် Izmit မြူနီစီပယ်မှာအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မြေငလျင်အတွက်ကျိုးပျက်လိမ့်မည်။ ဒေါက်တာ Oguz [ပို ... ]
Osmaniyey မြန်နှုန်းရထားန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်လာမကြာသေးမီကမြန်နှုန်းရထားလမ်း Konya-Adana - Osmaniye ကလူများအတွက် Osmaniye နှင့် Gaziantep ကောင်းသောသိတင်းပြည်နယ်များရဲ့အနာဂတ်müjdeledi.biz, ဒါပေမယ့်ယခုငါဘာသာရပ်လမ်းကြောင်းအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လျင်မြန်စွာ [ပို ... ]
ဘယ်ရွာကတတိယလေဆိပ်တင်ဒါသောကြာနေ့3အတူထီ ​​hit ရန်။ လေဆိပ်ကိုလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများ၏တန်ဖိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။3။ တံတားများနှင့်လက်လှမ်းလမ်းများ,3၏ပြဌာန်းခွင့်။ စီမံကိန်းများ၏ပဏာမဒီဇိုင်းကိုအဆင့်အစ္စတန်ဘူလ်ဥရောပဘေးထွက်အတွက် Karaburun-YeniköyTayakadınအတွက်လေဆိပ်နှင့် Marina [ပို ... ]
ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုများ Sanliurfa Sanliurfa အလင်းရထားလမ်းစနစ်စတင်ခဲ့ရထားလမ်းတည်လိမ့်ခေါ်ဆောင်သွားပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိများဦးစီးဌာန LRT များအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုစတင်ခဲ့သည်။ ခါရန်မြို့၌၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေမှကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အပေါ်ပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန [ပို ... ]
160 မီတာရှည်လျားဆောက်လုပ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာထဲမှာကြေးနီ cable ရဲ့ကေဘယ်လ်ထဲမှာမီးရထားလိုင်းİnönüခရိုင်အနီး Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ် high မြန်နှုန်းရထားများအကြားခိုးယူခံခဲ့ရ high-speed (YHT) လိုင်းအမည်မသိလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအားဖြင့်ခိုးယူခံခဲ့ရသည်။ Oklubal ၏ Eskisehir Inonu ခရိုင်ထဲကနေ-İstanbul [ပို ... ]
ဘယ်လိုTÜLOMSAŞတူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက္ကတစ်စာတဖြစ်လာရန်။ Inc က TCDD, မူတည်တူရကီလိုအပ်နေသည်ဟုစက်ခေါင်းထုတ်လုပ်ရန်ထူထောင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီမှာ Eskisehir ။ သို့ပြန်သွားရန်ကုမ္ပဏီတစ်ချိန်တည်းအပေါ်အခြေခံပြီးသည်အဘယ်မှာရှိငါ့အ Anadolu-အော်တိုမန်အော်တိုမန်အဖှဲ့ဟာအရပျ၌သမိုင်း [ပို ... ]
3 ။ လေဆိပ်နု (ဗီဒီယို) ၏ရှင်းလင်းသောဆုရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်
လေဆိပ်အစ္စတန်ဘူလ်3တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်နု၏ရှင်းလင်းသောဆုရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လေဆိပ်တင်ဒါ 22 152 Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon ဖက်စပ် Group မှအနိုင်ရကြောင်းဘီလီယံယူရို။ လူမှု်ဆောင်မှုများအတွက်ကျင်းပသည့်ပထမဦးဆုံးတံဆိပ်ခတ်-လေလံလေလံအတွက် Esenboga လေဆိပ်မှာ, 25 နှစ်ငှားရမ်း [ပို ... ]